MKO တွင် အမျိုးသမီးတို့၏ အခန်းကဏ္ဍကိုတိုးမြှင့်နေရာပေးလာ.....။
Troops from the KNLA and DKBA together atawelcome ceremony for DKBA defectors in December 2010 (DVB) By ZOYA PHAN
Published: 12 April 2011 I can’t remember how many times the Karen National Union and other ethnic political organisations have been dismissed as losing, or being on the verge of defeat. In February 1950 General Ne Win boasted to international media that victory over the Karen ‘insurgents’ would be completed by May that year. The New York Times duly reported: “Defeat of rebels withdrawing to hills would leave minor guerrillas to cope with.”
မိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ၀၀၄ ဧပြီ ၅၊ ၂၀၁၁ CIA အရာရှိဟောင်းတဦးသည် ယမန်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့ နေအိမ်တွင် သေဆုံးသွားသည်။ ဦးခေါင်းတွင် သေနတ်ဒဏ်ရာဖြင့်သေဆုံးခြင်း ဖြစ်ပြီး လက်တဘက်တွင် ခြောက်လုံးပူး၊ တဘက်တွင် လက်ဝါးကပ်တိုင် ကိုင်ထားသည်ဟု လန်ဒန်အခြေစိုက် The First Post အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းက ဆိုသည်။ အမည်မှာ Mr. Bill Young ဖြစ်ပြီး အသက် ၇၆ နှစ် ရှိပြီဟု သိရသည်။ အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ CIA ၏ သေနတ်သမားအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သူ Mr. Bill Young သည် စကားတိုးတိုးပြောသူ၊ အရပ်ရှည်ရှည် လူတယောက်ဖြစ်ပြီး သူ၏ ဗြိတိသျှ မိတ်ဆွေများက အငြိမ်းစားဂျိမ်းစ်ဘွန်းဟု တင်စားခံရသူ ဖြစ်သည်။ စိတ်ဓာတ်ကျပြီး သေဆုံးခြင်း ဖြစ်သည်ဟု တချို့က သုံးသပ်ကြသည်။ “တချိန်တုန်းက သူ ကျင်လည် ကျက်စားခဲ့သလိုပေါ့၊ သူ အခု အကြမ်းပတမ်းနည်းနဲ့ ဆုံးသွားရှာတာပဲ” ဟု သူ၏ မိတ်ဆွေတဦး၏ ပြောကြားချက်ကို The First Post တွင် တွေ့ရသည်။ ချင်းမိုင် အမေရိကန် ကောင်စစ်ဝန်ရုံး ၀က်ဆိုက်ရှိ နာရေးကြော်ငြာတွင် “ထူးခြားသည့်ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းခဲ့သူ ပုဂ္ဂိုလ်ထူးဖြစ်သည်” ဟု ဆိုသည်။ အငြိမ်းစားယူပြီးနောက် ချင်းမိုင်မြို့ပြင်ရှိအိမ်တွင် နေထိုင်စဉ် နှစ်ပေါင်းအတန်ကြာက ရခဲ့သော ရွှေတြိဂံဒေသ အဆက်အသွယ်များကို အသုံးပြုပြီး အမေရိကန်မူးယစ်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့အတွက် အလုပ်လုပ်ပေးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ Mr. Bill Young သည် မြန်မာပြည်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး တောင်ပေါ်တိုင်းရင်းသား ကျေးရွာများတွင် ကြီးပြင်းခဲ့သည်။ အနည်းဆုံး ဒေသခံစကား ၅ မျိုး အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုဒေသမှ ရခဲ့သော အဆက်အသွယ်များက နောက်ပိုင်း သူကျင်လည်ရာ အန္တရာယ်ကြီးသော ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းတွင် အသုံးတည့်ခဲ့သည်။ အဘိုးဖြစ်သူသည် သာသနာပြုတဦးဖြစ်ပြီး ၁၉ ရာစုနှစ်က မြန်မာပြည်ရှိ လားဟူ တိုင်းရင်းသားများကို ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ဖခင်ကလည်း သာသနာပြုတဦးဖြစ်သည်၊ ထို့ပြင် မော်စီတုန်း အာဏာရအပြီး တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းတွင် CIA ၏ ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ဖခင်ဖြစ်သူကြောင့် သူလည်း CIA တွင် ၀န်ထမ်းတဦး ဖြစ်လာသည်။ သူ အကျွမ်းတ၀င် ရှိခဲ့သည့် လားဟူတို့သည် ထိုင်း နှင့် လောနိုင်ငံတို့တွင်လည်း ပျံ့နှံ့ နေထိုင်လျက် ရှိရာ CIA တွင် တာဝန်ယူပြီးနောက် လောနိုင်ငံရှိ လားဟူသူပုန်များထံသို့ ရောက်သွားသည်။ ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲအတွင်း ကွန်မြူနစ်တို့၏ ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းကို အနှောင့်အယှက်ပေးရေးကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် သက်စွန့်ဆံဖျား ကျင်လည်စဉ် “လုပ်ငန်းသဘောအရ လူတွေ သတ်ရတယ်” ဟု သူက The First Post မှ သတင်းစာဆရာကို ပြောပြခဲ့ဖူးသည်။ အင်တာနက်စာမျက်နှာများတွင် တွေ့ရသော သူ၏ ငယ်ဘ၀ အဖြူအမည်း ပုံမှာ လောနိုင်ငံတွင် လှုပ်ရှားစဉ်က ဖြစ်သည်။ ချင်းမိုင်ရှိနေအိမ်တွင် ထိုပုံကို သတင်းသမားတဦးက ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ယမန်နေ့က ချင်းမိုင်ရှိ လားဟူတို့၏ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတခုတွင် သူ့အတွက် ၀တ်ပြုဆုတောင်းပွဲ ပြုလုပ်ကြသည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် သူ့ကို ချင်းမိုင်တွင် သဂြိုင်္ဟ်မည်။ သူ့အဆက်အသွယ် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများလည်း သူ၏ နောက်ဆုံးခရီးကို ပို့ဆောင်ဖွယ် ရှိသည်ဟု သိရသည်။ သူ၏ ဘ၀ဇာတ်လမ်းကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ရန် ဟောလိဝုဒ်မှ ကုမ္ပဏီတခုက သူ့ကို ဒေါ်လာ တသိန်း ပေးအပ်ခဲ့သည်။ သူ့အကြောင်း ရိုက်ကူးသည့်ဇာတ်ကား ပိတ်ကားထက်မရောက်မီ သူ ကွယ်လွန်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ Posted by